I-2020 Thenga ubumsulwa obuphezulu beTadalafil powder online: Zonke izinto kufuneka uyazi!
/Blog/tadalafil/Yonke into omele uyazi ngeTadalafil
ezaposwa ngomhla 03 / 06 / 2018 by 阿斯劳 bha liweyo tadalafil.
1. Yintoni i-Tadalafil powder?
Tadalafil powder (171596-29-5) lunyango lonyango olufumaneka ngeendlela ezahlukeneyo zomlomo njengepilisi kunye nomgubo. Eli chiza likho kwimarike phantsi kwamagama eebhanti ezahlukeneyo ezinjengeAdcirca kunye neCialis. Kwakhona, i-tadalafil ikhona kwifom yayo yohlobo oluqhelekileyo. Nangona kunjalo, akucebisi ukuba usebenzise i-generic tadalafil powder njengoko inokuswela onke amandla esiyobisi sokuqala; ke, kuya kufuneka ulumke kakhulu xa uthenga la mayeza afana ne-tadalafil. Qinisekisa ukuba uthenga ifom ye-tadalafil efanelekileyo ukuze ufumane iziphumo ezingcono. Ugqirha wakho uya kukukhokela malunga nendlela kwaye ungawuthenga phi umgangatho weTadalafil powder.
ITadalafil (171596-29-5) isetyenziswa phantsi kwamagama eempawu ezahlukeneyo ukunyanga iimeko ezahlukeneyo zempilo. Umzekelo, i-Cialis isetyenziswa kakhulu kunyango lwe-erectile dysfunction okanye ukungabi namandla emadodeni kunye ne-benign prostatic hypertrophy, ebizwa ngokuba yi-Prostate eyandisiweyo. Kwelinye icala, i-Adcirca, ekwayenye uphawu lwe-tadalafil, isetyenziselwa unyango lwe-pulmonary arterial hypertension. I-Adcirca ikwasetyenziselwa ukuphucula ukubanakho kokuzilolonga emadodeni nakwabasetyhini abanesifo semiphunga.
Kuhlala kucetyiswa ukuba uthathe eli chiza phantsi kwesikhokelo sikagqirha wakho ukunqanda ukuba neziphumo ebezingalindelekanga ezibi. Nokuba ungafikelela njani ngokulula kwi-tadalafil powder ungayithathi ngaphandle kokuya kuvavanyo lonyango. Kungenxa yokuba iyeza belisebenzela umhlobo wakho, ayizenzekeli eya kuthi izise iziphumo ezisemgangathweni kuwe. Imizimba yabantu yahlukile, yiyo loo nto ugqirha kufuneka athabathe isigqibo esifanelekileyo emva kokuvavanya imeko yakho yempilo. Xa isetyenziswe gwenxa okanye ibekelwe ngaphezulu, i-tadalafil inokukhokelela kwiziphumo ebezingalindelekanga ezinokubangela ukubuyela umva kwaye ngamanye amaxesha zingenakuphikiswa.
2.Isebenza njani i-Tadalafil powder?
I-Tadalafil powder iphakathi kwamayeza akwiklasi yamachiza eyaziwa ngokuba yi-phosphodiesterase uhlobo lwe-5 inhibitors (PDE5). Onke amachiza akweliklasi asebenza ngendlela efanayo kwaye asetyenziswa zonyango ukunyanga iimeko ezifanayo zempilo. Ngokwesiqhelo, iziyobisi zihlelwa ngokwamaqela awahlukeneyo abiza iiklasi. Amaqela aqulathe iziyobisi ezinepropathi ezifanayo kwaye zisebenza ngendlela efanayo. I-Tadalafil inceda ekuhlaziyeleni kwesihlunu kunye nemisipha ye-Prostate, ekhulisa iimpawu zakho ze-benign prostatic hyperplasia (BPH) kubandakanya; Ubuhlungu ngelixa uchama, unengxaki yokuchama kwaye kufuneka ngokungxamisekileyo.
Eli chiza lonyusa ukuphuma kwegazi lomzimba wakho ukuya kwilungu lobudoda, ethi yona incede ekufumaneni nasekugcineni ulwakhiwo. I-Tadalafil isetyenziselwa unyango lwe-erectile dysfunction emadodeni, kodwa inceda kuphela xa uvuka ngokwesondo. Ukwakhiwa kwepenal kwenzeka xa ilungu lobudoda ligcwele ligazi. Ulwakhiwo lwenzeka emva kokuba imithambo yegazi ejongene nokuhambisa igazi yanda kwaye yonyusa ukubonelelwa kwegazi ngelixa abo banikwe uxanduva lokususa igazi kwisivumelwano sobudoda. Xa igazi liqokelela kwilungu lobudoda, libangela ulwakhiwo. Izifundo zibonise ukuba i-tadalafil inyusa amandla okufikelela kulukhuni kunye nokuzinzileyo kuninzi lwamadoda ane-erectile dysfunction.
Kwi-PAH, eli chiza lihlaziya imithambo yegazi kwimiphunga yakho ukunyusa ukuphuma kwegazi, nto leyo iphucula amandla akho okuzivocavoca. Xa uthatha eli chiza, uya kuthi, ke, ube namandla awoneleyo okusebenza iiyure ezinde kwaye ufezekise iinjongo zakho ngexesha elincinci elinokwenzeka.
3.Ungayithatha njani i-Tadalafil powder?
Iingcebiso zeMedical ukuba uthathe i-tadalafil powder ubuncinci imizuzu eyi-30 ngaphambi kokuba uzibandakanye nomsebenzi wesondo. Iyeza eli liya kuba luncedo xa ulithatha kunye okanye ngaphandle kokutya. Kuya kufuneka uthathe i-tadalafil kuphela xa ufuna ukuba nesondo. Nangona kunjalo, kumadoda angathanda ukuba neentlobano zesini ezithandekayo ngaphezulu kwamaxesha amathathu okanye nangaphezulu evekini, angaya ke kumthamo wemihla ngemihla, oza nethamo ezimbini, i-2.5mg kunye ne-5mg. Umthamo ophakanyisiweyo ngosuku yi-10mg, kodwa xa akwanelanga wena, ke amayeza akho anokunyusa umthamo ukuya kwi-20mg. Nangona kunjalo, bonana nodokotela wakho ngaphambi kokuba utshintshe umthamo wokuthintela iziphumo ezibi ze-tadalafil powder.
I-Tadalafil kufuneka ithathwe kube kanye kuphela kwiiyure ezingama-24. Xa ungafumani izilungiso ozilindeleyo, sukufaka enye idosi kwangolo suku lunye. Kuqhelekile ukuba abasebenzisi be-tadalafil bexesha lokuqala bafumane ukulibaziseka ekufumaneni iziphumo ezifunwayo. Imizimba yabantu yahlukile, njengoko kuchaziwe ngaphambili kweli nqaku. Abanye abantu banokufumana iziphumo ze-tadalafil powder ngaphakathi kwemizuzu engama-30 ngelixa abanye befumana ukulibaziseka. Nangona kunjalo, oogqirha bancomela ukuba uthathe idosi yamayeza malunga neentsuku ezisibhozo ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokuya kumthamo ophezulu okanye ukhetho olwahlukileyo.
Akufuneki uthathe i-tadalafil powder kunye naziphi na ezinye iziyobisi ze-erectile dysfunction okanye i-creams. Ke, yazisa ugqirha wakho ukuba uthatha amanye amayeza e-ED ngaphambi kokuba uqale i-tadalafil dosage. Nangona kukho iindlela ezahlukeneyo ze-tadalafil kwimarike, ezinjenge-sildenafil, Viagra, Spedra, kunye neCialis, akufanele ubeke umngcipheko wokuthatha nayiphi na yazo nge-tadalafil; kungakhokelela kwiziphumo ezibi kakhulu. Thatha enye ngexesha kodwa phantsi kwengcebiso kagqirha wakho. Ngaphandle koko, ukuba uthatha naliphi na iyeza le-nitrate ukunyanga iingxaki zentliziyo okanye iintlungu zesifuba ezinjenge-isosorbide dinitrate, nitroglycerin, isosorbide mononitrate, kunye neziyobisi zokuzonwabisa njengeopopu, uyacetyiswa ukuba uhlale kude ne ukuthatha i-tadalafil powder. Ukudibanisa i-tadalafil kunye naliphi na ichiza le-nitrate kungakhokelela ekuncipheni okukhulu koxinzelelo lwegazi.
Ukuba kwicala elikhuselekileyo, yazisa ugqirha wakho malunga nawo onke amayeza owasebenzisayo okanye ukuba uphantsi kwalo naluphi na unyango ngaphambi kokuba uqale ukuthatha i-tadalafil. Kwimeko apho ufumana ama-erections abuhlungu, okanye ii-erections zithathe ixesha elingaphezulu kweeyure ze-4 zazise amayeza akho kwangoko. Ukuhamba kwexesha elide kungonakalisa izihlunu zakho zepenisi. Kwakhona, ukuba awuphazamisani ne-tadalafil, ungazibeki emngciphekweni wokuthatha ugqirha wakho ukuba akwenzele enye indlela ekhuselekileyo. I-Tadalafil sisiyobisi esinamandla kakhulu sokungasebenzi kakuhle kwe-erectile, kodwa kufuneka sithathwe ngononophelo oluninzi ukuthintela iziphumo eziphezulu. Namathela kwiidosi ezimiselweyo zeziphumo ezingcono.
4.Ukusetyenziswa kweTadalafil powder
Ngokwesiqhelo, i-tadalafil powder isetyenziselwa unyango lweengxaki zesondo zesilisa njengokuzala kunye nokungasebenzi kakuhle kwe-erectile. Ngaphandle kokuphucula ukuvuselela ngokwesondo, i-tadalafil ikwaphucula ukuphuma kwegazi kungena kwilungu lobudoda ukunceda indoda ifumane kwaye iqinise ii-erections ezinzima ixesha elide. Eli chiza liyaziwa ngokunceda amadoda ekubeni namava okwabelana ngesondo ixesha elide. Abasebenzisi beTadalafil bayonwabela ii-erections ezinzima kunye nezide. Nangona kunjalo, ichiza kufuneka lithathwe kanye ngosuku kunye nemizuzu ye-30 ngaphambi kwesondo.
Kwelinye icala, i-tadalafil powder ikwasetyenziswa kunyango lwe-benign prostatic hyperplasia (BPH) yeempawu. Iyeza liyazikhulula iimpawu ze-BPH ezinjengomjelo obuthathaka, ubunzima ekuqaliseni ukuhamba komchamo, kunye nokuchama rhoqo, ngakumbi ezinzulwini zobusuku. Nantsi i-tadalafil ikunceda ngokuphumla kwisinyi egudileyo kunye nezihlunu zeprotate. Nangona kunjalo, musa ukuthenga kwaye uqale ukusebenzisa i-tadalafil powder nokuba ufumana iimpawu ze-BPH ngaphambi kokuba uvavanywe ngonyango. Khumbula ukuba ichiza kufuneka limiselwe ngugqirha ngalo lonke ixesha.
Ugqirha ukwamisela i-tadalafil powder kubantu abane-pulmonary arterial hypertension (PAH). Le yimeko apho kukho uxinzelelo lwegazi oluphezulu kwimithambo yakho ehambisa igazi ukuya emiphungeni, kwaye oko kukhokelela ekubeni nesiyezi, ukuphefumla okufutshane kunye nokudinwa. Abantu abaninzi abaphethwe yile meko bakufumanisa kunzima ukwenza imithambo rhoqo. Nangona kunjalo, iindaba ezimnandi zezokuba i-tadalafil powder idlala indima ebalulekileyo ekuncedeni abaguli be-PAH ukuba benze umsebenzi wabo ngokukhululekileyo ngokunciphisa imeko yomzimba.
Nangona kunjalo, i-tadalafil ayizukukhusela kwizifo ezidluliselwa ngesondo, ezibandakanya ihepatitis B, i-HIV, isifo seswekile, kunye negonorrhea, phakathi kwabanye. Konke kuyo yonke into, qinisekisa ukuba unesondo elikhuselekileyo nelikhuselekileyo lonke ixesha. Kwimeko apho ungaqinisekanga ngendlela yokuzikhusela xa usabelana ngesondo, ungasebenzisa ikhondomu ye-latex. Ngolwazi oluthe kratya, dibana nodokotela wakho okanye ugqirha wakho.
5.Umthamo weTadalafil powder
Idosi yeTadalafil inokwahluka ukusuka komnye umsebenzisi ukuya komnye, kuxhomekeke kwisizathu sokusetyenziswa kwayo. Imeko yakho yempilo kunye nendlela umzimba wakho uphendula ngayo kwichiza kuya kuba nefuthe kumthamo wakho. Nangona kunjalo, kuhlala kucetyiswa ukuba uqale ngeedosi eziphantsi ezicetyiswayo, ezinokunyuswa kamva ngugqirha wakho emva kokuvavanya inkqubela phambili yamayeza. Ungaze uhlengahlengise idosi ngaphandle kokwazisa amayeza akho njengoko kunokukhokelela kwiziphumo ebezingalindelekanga ezibi okanye ukusilela ukuhambisa iziphumo ezilindelekileyo. Iidosi zeTadalafil powder zezi zilandelayo;
Umthamo wokungasebenzi kakuhle kwabadala
Le tadalafil powder dosage yenzelwe indoda enobunzima ekufumaneni nasekugcinweni izilungiso ezinzima. Umthamo wokuqala ocetyiswayo yi-10mg ekufuneka ithathwe ngomlomo kube kanye ngemini okanye kwimizuzu engama-30 ngaphambi kokungena kwisondo. Ukuba awunazo iziphumo, kuya kufuneka uqhubeke nokuthatha idosi yakho yesiqhelo ukuya kwiintsuku ezisibhozo, undwendwele ugqirha wakho ukuze ulungelelanise idosi. Abanye abantu bafumana ukulibaziseka ekufumaneni iziphumo, ngakumbi okokuqala abasebenzisi be-tadalafil. Nangona kunjalo, idosi inokunyuswa iye kwi-20mg ngosuku. Ukugcina i-tadalafil powder dosage ukusuka kwi-5 ukuya kwi-20mgs ekufuneka ithathwe kube kanye ngemini njengoko kufuneka okanye ngaphambi komsebenzi wesondo. I-Tadalafil yedosi ye-ED ixhomekeke kunyamezelo lomntu kunye nokusebenza. Umthamo unokuhliswa ngakumbi kubasebenzisi abafumana iziphumo ebezingalindelekanga nasemva kokuthatha idosi esezantsi ye-10mgs ngosuku.
Ukusetyenziswa kwe-tadalafil powder imihla ngemihla, idosi yokuqala yomlomo kanye ngemini yi-2.5mg kwaye kufuneka ithathwe ngexesha elifanayo yonke imihla, ngaphandle kokujonga ixesha lokulala ngokwesondo. Le dosi yenzelwe abasebenzisi abangathanda ukuba neentlobano zesini amatyeli amathathu okanye ngaphezulu ngeveki. Apha, umthamo wolondolozo uphakathi kwe-2.5 ukuya kwi-5mgs ngemini kwaye kufuneka uthathwe ngomlomo kanye kwiiyure ze-24.
I-Tadalafil powder dosage ye-Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) kunye nokungasebenzi kakuhle kwe-erectile (ED)
Unokuthatha i-tadalafil ukunyanga iimeko ezimbini ngexesha elinye, ezinokuba ziindaba ezilungileyo kubasebenzisi. Unyango olunempumelelo lwe-ED kunye ne-BPH, umthamo ocetyiswayo yi-5mg dosage imihla ngemihla, ekufuneka ithathwe ngomlomo malunga nexesha elinye. Apha, awunyanzelekanga ukuba uthathele ingqalelo amaxesha akho ezesondo kodwa unamathela nje kwimiyalelo yedosi ukufikelela kwiziphumo ozifunayo. Thatha umthamo wakho kude kufike ugqirha wakho okucebisa ukuba uyeke emva kokujonga inkqubela phambili kumayeza.
I-Tadalafil powder Pulmonary Hypertension dosage
Unyango olunempumelelo lwePulmonary Hypertension, kuya kufuneka uthathe i-tadalafil powder 40mgs kube kanye ngemini. Awufanelanga ukwahlula umthamo we-40mgs ngosuku okanye ukwandisa okanye ukunciphisa idosi.
Idosi ye-tadalafil yabantu abadala yeBenign Prostatic Hyperplasia
Unyango lwe-BPH, kuya kufuneka uthathe i-5mgs dosage dosage ngomlomo kanye ngemini kwaye uqiniseke ukuba uyithatha phantse ixesha elifanayo yonke imihla malunga neeveki ze-26. Ugqirha wakho unokunyusa okanye anciphise umthamo wemihla ngemihla ngokuxhomekeka kwindlela umzimba wakho ophendula ngayo kwiidosi kwiiveki ezimbalwa zokuqala. Kwimeko yazo naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga ezihambelanayo uhlale unxibelelana nodokotela wakho kwangaphambi kokuba imeko ibe mandundu.
6.I-Tadalafil powder isiqingatha-sobomi
Tadalafil powder ubomi obulicla ihlala isebenza emzimbeni wakho malunga neeyure ze-36 emva kokuthatha idosi yakho. Oko kwenza i-tadalafil lukhetho olufanelekileyo kubasebenzisi abaninzi abajonge ukuphucula amava abo ezesondo. Ukuthatha i-tadalafil ipowder yemihla ngemihla kuyakunceda ukuba ufumane i-firmer kunye ne-erections ende emva kokuthatha idosi malunga neentsuku ezintathu ukuya ezintlanu zokusetyenziswa kokuqala. Amadoda angaphenduli kakuhle kwiimfuno zedatha ephezulu, ukuthatha i-tadalafil dosage yemihla ngemihla kuya kuba luncedo kakhulu. Iidosi zemihla ngemihla zilungele ukubonelela malunga nophuculo olubalulekileyo kwi drive yakho yesondo.
Kuhlala kucetyiswa ukuba uthathe i-tadalafil powder dosage kanye ngemini kwaye ukuba awufumani ziphumo ungathathi enye idosi ngaphakathi kweeyure ezingama-24. Iziphumo ze powder zeTadalafil zinokulibaziseka kwabanye abasebenzisi, kodwa oko akuthethi ukuba kuya kufuneka uthathe idosi eyongezelelweyo kwangolo suku lunye. Ixesha lokuqala labasebenzisi be-tadalafil ye-powder banokufumana ukulibaziseka, kodwa ngokuhamba kwexesha bafumane ukulungiswa okufunwayo.
7.Iziphumo ebezingalunganga zeTadalafil powder
Kanye njengokuba i-tadalafil powder sisiyobisi esinamandla esinokunceda abantu kunyango lweemeko ezahlukeneyo zempilo, ukuba sisetyenziswe gwenxa okanye sigqithe kakhulu sinokukubonakalisa kwezinye iziphumo ezibi. Uninzi lwe iziphumo ze-tadalafil powder zibangelwa kukusetyenziswa gwenxa kunye nendlela umzimba wakho uphendula ngayo kwichiza. Ngokwesiqhelo, abanye abantu banokungazonwabisi izibonelelo zamachiza nasemva kokuthatha idosi efanelekileyo. Abanye abasebenzisi banokufumana iziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa kunabanye. Ezinye iziphumo ebezingalindelekanga eziqhelekileyo ze-tadalafil zinokuphela ngokuhamba kwexesha, kwaye zezi zilandelayo;
Intloko ixhaphake kakhulu ngelixa uthatha i-tadalafil yakho powder. Unokufumana ukubetha kwentliziyo, ukubetha, isicaphucaphu, ukugungqa, urhudo kunye nokukhohlela. Iintlungu kumqolo wakho, isisu, imilenze, okanye iingalo ziqhelekile kakhulu kubasebenzisi abaninzi be-tadalafil. Njengoko kuchaziwe, ezi ziphumo kufuneka zinyamalale emva kwethutyana, kodwa kwimeko yokuba zihlala ixesha elide kunokuba kulindelwe ukuba zazise ugqirha wakho ukuba akuncede ufumane isisombululo. Iindaba ezimnandi kukuba phantse zonke ezi ziphumo zisecaleni ze-tadalafil zinokulawulwa.
Kukho ezinye iziphumo ebezingalindelekanga ezinobuzaza zokuba ufune ukhathalelo lukagqirha ngoko nangoko uqalisa ukuzifumana, kwaye zibandakanya;
Ukuphulukana kombono okanye umbono oqaqambileyo xa uthatha i-tadalafil. Abanye abasebenzisi banokuqalisa ukufumana ubunzima kumbono wabo nje ukuba baqale ukuthatha eli chiza, kwaye nje ukuba kwenzeke, tsalela umnxeba ugqirha wakho ngexesha elifutshane kakhulu.
Naluphi na utshintsho kumbono wombala kufuneka luxelwe kwangoko kwiziko lezonyango elikufuphi kuwe okanye kwii-medics zakho. Abanye abasebenzisi banokufumana ubunzima ekuchongeni imibala ethile, njengokuxelela umahluko phakathi kohlaza kunye noblowu.
Ukuva iingxaki, ukukhala iindlebe, ukuphulukana, kunye nokuhla kweendlebe yenye yeziphumo ebezingalindelekanga ezinokubakho.
Ukunyuswa kwexesha elide okuhlala ngaphezulu kweeyure ze-4.
Ubuhlungu besifuba kunye nesiyezi, ulusu olutshisi okanye ukugqabhuka, ukuqina, ulwimi, amehlo, imilebe nobuso.
Ubunzima bokugwinya okanye ukuphefumla kufuneka buqwalaselwe kwangoko.
Ukusilela ukwazisa ugqirha wakho malunga neziphumo ezibi ezikhawulezileyo ezinokukhokelela kwiimeko ezingenakuguqulwa kwaye ngamanye amaxesha kunokukhokelela ekufeni. Sukuthandabuza ukunxibelelana noochwephesha bezonyango ukuba ufumana naziphi na iziphumo. Ngokulinganayo, ungaqhubeki nomthamo ngaphandle kokuchazela ii-medics zakho njengoko kunokukhokelela kwingxaki ngakumbi okanye imeko yakho ibe mbi. Zonke iziphumo ebezingalindelekanga ze-tadalafil ziyahlawuleka, kwaye ugqirha wakho uya kukucebisa ngokufanelekileyo emva kokuvavanya imeko yakho.
Tadalafil powder kwintengiso Ifumaneka kwimarike nokuba yeyivenkile ekwi-Intanethi okanye kwiikhemesti zomzimba. Nangona kunjalo, unokufumana phantsi kwamagama ohlobo oluthile lweempawu ezifana neCialis okanye Adcirca, kuxhomekeke kwindawo yakho. Esi siyobisi sigunyazisa ukuba semthethweni kwiindawo ezininzi, kwaye akufanelanga ube naloyiko xa unakho, usithenga, okanye usingenisa elizweni isiyobisi. E-United States yaseMelika, iTadalafil yaqala yamkelwa kwi-2003 kunyango lwe-erectile dysfunction, kwaye kule minyaka idlulileyo ibonakalisile ukuba iyasebenza. I-tadalafil powder ifumaneka kwiigram ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kwinani olifunayo lokunyanga imeko yakho.
Ukhululekile ukuba Thenga i-tadalafil powder ininzi okanye nje ngokwaneleyo kusuku lwakho olunye okanye kwiintsuku ezimbalwa zokusebenzisa ngokuxhomekeke kugqirha ugqirha. Zininzi abathengisi be-tadalafil powder kwimarike yanamhlanje, kodwa qiniseka ukuba uyifumana kumenzi owaziwayo kunye nomthengisi. Ayingabo bonke abathengisi ohlangana nabo kwintengiso abaneziyobisi ezisemgangathweni. Khumbula, ukufumana iziphumo ezingcono nezikhawulezayo; Kuya kufuneka usebenzise umgangatho we-tadalafil powder ngalo lonke ixesha. Kukho uhlobo oluthile lwe-tadalafil powder, enokuthi ishiye ezinye zeempawu kwaye isenokungabinakho ukunyanga imeko yakho.
Kwimeko apho awuqinisekanga malunga nokuba ungayifumana phi okanye ungayifumana njani na umgangatho we-tadalafil powder, ke ungoyiki ukuthetha nodokotela wakho. Iingcali kwezonyango zezona zibalulekileyo ebantwini ekukuboniseni apho banokufumana khona amayeza abakunika wona. Nangona kunjalo, uhlala ulungile ukuba wenze uphando lwakho ukuze ukwazi ukubona abenzi be-tadalafil powder abavelisi kunye nabathengisi abakungqongileyo. Qiniseka ukuba uthenga i-tadalafil powder epakishwe kakuhle eya kwenza kube lula ukuba uyigcine njengoko uqhubeka nedosi yakho.
9.Ungayithenga phi i-Tadalafil powder?
Umhlaba uyatshintsha, kwaye ngokungafaniyo neentsuku ezithile emva, unako ukuthenga i-tadalafil powder kwi-intanethi kwiwebhusayithi yethu kwaye ufumane imveliso yakho ngexesha elifutshane kunokwenzeka. Ungafikelela kwindawo yethu nge-smartphone yakho, ithebhulethi, okanye ilaptop kwaye wenze iodolo yakho kwindlu yakho okanye kwiofisi. Ngaphandle koko, usenokufumana i-tadalafil powder kwi-pharmacy yakho. Nangona kunjalo, sihlala sicebisa abathengi bethu ukuba balumke kakhulu xa bejonga eyona nto ibalaseleyo kumthengisi we-tadalafil powder nokuba kwi-Intanethi okanye emzimbeni. Abanye babathengisi beziyobisi banokugcina imveliso ekumgangatho osezantsi eya kusilela ukuhambisa iziphumo ezinqwenelekayo okanye bagqibe ukukubeka kwimiphumo emibi.
Yenza uphando malunga nenkampani malunga nokuthenga i-tadalafil powder ukusuka ukuqonda ukuba isebenza njani. Eyona ndlela ilungileyo kukujonga ukulinganisa kwenkampani kunye nokuhlolwa kwabathengi. Inkampani ebekekileyo iya kuba nengxelo entle kunye nokulinganisa okuhle kakhulu. Funda amava abathengi abahlukeneyo kwaye uthathe isigqibo malunga nolwazi. Umthengi onoyolo uya kuhlala ecebisa abanye abathengi kumboneleli, kwaye abo badanileyo abasoyiki ukubonisa ukudana kwabo. Musa ukungxama xa uthenga i-tadalafil powder, thatha ixesha lakho, kwaye ufunde izibonelelo zabaxhasi kunye nabavelisi abakhoyo kwimakethi. Ugqirha wakho unokukunceda ekuchongeni umthengisi obalaseleyo we-tadalafil ngeenxa zonke.
Sikhokela umthengisi we-tadalafil kwingingqi, kwaye besiphambi komdlalo iminyaka emininzi ngoku. Sinikezela ngeemveliso zonyango ezisemgangathweni kubo bonke abathengi bethu kunye nokwenza ukutya okufika ngexesha kwihlabathi liphela. Iwebhusayithi yethu esebenziseka lula ikuvumela ukuba wenze i-odolo yakho ngemizuzwana naphi na. Ungahamba ngokulula ukusuka kwimveliso uye kwenye kwiwebhusayithi yethu. Iimveliso zethu zonyango, ezifana ne-tadalafil powder zigcwele kakuhle ukuthintela nakuphi na ukunyangwa ngelixa lokuhamba kwaye kukwenze kube lula kuwe ukuba uligcine ichiza. Nangona kunjalo, sihlala sicebisa bonke abathengi bethu abathembekileyo, ukuba bangaqali ukuthatha amachiza ethu ngaphandle kokuvavanywa konyango kwaye bafumane unyango olufanelekileyo kwiingcali zonyango.
Yonke imibuzo okanye iinkxalabo malunga ne-tadalafil powder, ukhululekile ukuba uqhagamshelane nathi ngalo naliphi na ixesha. Idesika yethu yokukhathalela abathengi iya kulungisa yonke imiba yakho kwaye ikuncede wenze iodolo kwiqonga lethu. Gcina umgubo kude nabantwana kwaye uthathe idosi ecetyiswayo yeziphumo ezingcono. Kwimeko apho ufumana nayiphi na imiphumo, yazisa ugqirha wakho ngengcebiso kunye nesikhokelo.
10.I-Tadalafil powder vs Sildenafil Citrate powder
La machiza mabini ngala phosphodiesterase-5 (PDE5), kwaye oko kuthetha ukuba baphantse basebenze ngendlela efanayo. I-tadalafil powder kunye ne-sildenafil citrate powder zininzi ngokufanayo, kwaye zisetyenziselwa ukunyanga ukungabi namandla kunye ne-erectile dysfunctions emadodeni. Nangona kunjalo, la mayeza mabini anokusebenza kuphela xa umsebenzisi evuka. Xa ulandela yonke imiyalelo yedosi, i-tadalafil kunye ne-sildenafil citrate powder inokukunceda ufumane ulungelelwaniso oluqinileyo kunye nolude.
Ngokwendlela yokusebenza, i-tadalafil powder isebenza ngaphakathi kwe-16 ukuya kwi-45 imizuzu emva kokuthatha idosi yakho. Kwelinye icala, i-sildenafil ihambisa iziphumo ngaphakathi kwemizuzu engama-30, kwaye xa uthatha ukutya okunamafutha aphezulu, inokuchaphazela ukusebenza kwesiyobisi. Ke ngoko, i-sildenafil citrate powder kufuneka ithathwe kwisisu esingenanto ukuze ufumane iziphumo ezingcono. Phantse zonke ii-PDE5 inhibitors zisebenza ngokufanayo. Nangona kunjalo, ngaphandle kokusebenza kwe-sildenafil emi kwi-84% kunye ne-tadalafil kwi-81%, uninzi lwamadoda lukhetha ukuthatha i-tadalafil powder kuba inexesha elide ngakumbi.
I-Tadalafil powder ingathathwa xa ifuneka okanye yonke imihla. Ngokwesiqhelo, iidosi ze-tadalafil zemihla ngemihla zincinci kuneedosi xa kufuneka njalo. Umzekelo, i-10mgs sisiqalo se-tadalafil ngaphambi komsebenzi wesondo. Nje ukuba zithathiwe, iziphumo ziya kuhlala malunga neeyure ezingama-36. Ugqirha wakho unokunyusa idosi kwi-20mg okanye ayinciphise iye kwi-5mg xa iziphumo ebezingalindelekanga zinganyamezeleki. Imilinganiselo yansuku zonke, i-tadalafil powder powder dosage yi-2.5mg ye-ED kunye ne-50mg xa unyanga i-BPH. Abasebenzisi bakwacetyiswa ukuba bangayinyusi idosi ye-tadalafil ngaphandle kwengcebiso kagqirha yokunciphisa iziphumo ebezingalindelekanga.
I-Sildenafil citrate powder kufuneka ithathwe kube kanye ngemini kunye neyure ngaphambi kokuba uzibandakanye kwizenzo zesondo. Iyeza kufuneka lithathwe ngesidingo, kwaye idosi ekhuthazwayo yi-50mgs, onokuthi uthathe imizuzu engama-30 okanye iiyure ezine ngaphambi kwesondo. Kwezinye iimeko, i-sildenafil citrate powder dosage inokunyuswa iye kwi-100mgs ukuba idosi ye-50mg isilela ukuhambisa iziphumo ezinqwenelekayo. Ugqirha wakho unokunciphisa idosi kwi-25mgs ukuba ufumana iziphumo ebezingalindelekanga. Njenge tadalafil, i-sildenafil citrate powder kufuneka ithathwe kube kanye ngemini nokuba awufumani ziphumo ngaphakathi kweeyure ze-4.
Ezi ziyobisi zimbini, xa zisetyenziswa kakhulu okanye zisetyenziswe gwenxa, zinokukhokelela kwimiphumo emibi efanayo njengokugungxuka, iintloko entloko, kunye nokudumba. Nangona kunjalo, ukuqonda kombala kunxulumene ngakumbi ne-sildenafil citrate powder. Iindaba ezimnandi zezokuba zonke iziphumo ebezingalindelekanga ezichaphazela iziyobisi zinokulawulwa ukuba ufuna unyango kwangoko. Zive ukhululekile ukubonana nodokotela okanye ugqirha wezamayeza ngolwazi oluthe kratya malunga tadalafil powder kunye ne-sildenafil citrate powder.
Kukreja, RC, Salloum, FN, Das, A., Koka, S., Ockaili, RA, & Xi, L. (2011). Ukusetyenziswa okutsha kwe-phosphodiesterase-5 inhibitors kwizifo zentliziyo. Uvavanyo lweCardiology yezonyango, 16(4), e30.
IMostafa, ME, uSenbel, AM, kunye ne-Mostafa, T. (2013). Iziphumo ze-tadalafil yedosi ephantsi engapheliyo kwizicubu ze-penile cavernous kwiigundane zeswekile. Urology, 81(6), 1253-1260.
UKaya, B., Çerkez, C., Işılgan, SE, Göktürk, H., Yığman, Z., Serel, S.,… kunye no-Ergün, H. (2015). Thelekisa iimpembelelo zenkqubo ye-sildenafil, i-tadalafil, kunye ne-vardenafil yonyango ekusindeni kwe-flap yolusu kwiigundane. Ijenali yotyando lweplastiki kunye nokuhlinzwa kwezandla, 49(6), 358-362.
UPorst, H., Roehrborn, CG, Secrest, RJ, Esler, A., kunye noViktrup, L. (2013). Iziphumo ze-tadalafil kwiimpawu ezisezantsi zomchamo wesibini ukuya kwi-benign prostatic hyperplasia kunye nokungasebenzi kakuhle kwe-erectile kumadoda abelana ngesondo aneemeko zombini: Uhlalutyo lwedatha edityanisiweyo evela kwizifundo ezine zeklasikhi, ezilawulwa yi-tabofil. Inkcazelo yeyeza zonyango, 10(8), 2044-2052.
Yintoni i-Super Cardarine? / IiNzuzo ze-8 zeCarardarine Yintoni i-methenolone enanthate powder?